Iindaba - Malunga neanesthesia yendawo
I-anesthesia yendawo (i-anesthesia yendawo) yindlela yokuthintela okwethutyana ukuqhuba kwe-nerve kwindawo ethile yomzimba ukuvelisa i-anesthesia, ebizwa ngokuba yi-anesthesia yendawo.
Xa kuthelekiswa ne-anesthesia ngokubanzi, ayinampembelelo engqondweni, kwaye inokuba nenqanaba elithile le-analgesia yasemva kokusebenza. Kwangelo xesha, kulula ukusebenza, kukhuselekile, kwaye kuneengxaki ezimbalwa. Inempembelelo encinci kwimisebenzi yomzimba yezigulana kwaye inokuthintela iintlobo ezahlukeneyo zemithambo-luvo. impendulo.
Ukusetyenziswa kwamachiza okuthintela ukuhanjiswa kwemithambo-luvo ukuhambisa i-anesthesia kwindawo ethile yomzimba kuthiwa yi-anesthesia yendawo. Xa imithambo-luvo yemithambo ivaliwe, iintlungu zalapha kunye nemvakalelo zithintelwe okanye zanyamalala; xa imithambo-luvo yemoto ivaliwe ngaxeshanye, intshukumo yemisipha ibuthathaka okanye ikhululeke ngokupheleleyo. Le bhloko yeyokwexeshana kwaye ibuyela umva ngokupheleleyo.
I-anesthesia yendawo ilula kwaye kulula ukuyisebenzisa, ikhuselekile, inokugcina isiguli siphaphile, iphazamise kancinci ukusebenza komzimba, kwaye inezingxaki ezimbalwa. Ilungele imisebenzi encinci kunye naphakathi kunye nokusikelwa umda okuphezulu. Nangona kunjalo, xa isetyenziswa kwimisebenzi emikhulu kunye nenzulu, iintlungu zihlala zingonelanga, kwaye ukuphumla kwezihlunu akulunganga. I-anesthesia esisiseko okanye i-anesthesia encedisayo kufuneka isetyenziselwe abaguli ekungekho lula ukusebenzisana nabo, ngakumbi ebantwaneni, ke umda wesicelo ulinganiselwe. Indawo eziqhelekileyo ezisetyenziselwa ukubulala ii-anesthetics zii-esters ezifana ne-procaine, i-tetracaine kunye ne-amide efana ne-lidocaine. Ukuze usebenzise i-anesthesia yendawo ngokukhuselekileyo nangokufanelekileyo, kufuneka umntu aqhelane ne-pharmacology ye-anesthetics yendawo, i-peripheral nerve anatomy, kunye nemigaqo esisiseko ye-anesthesia yendawo.
Xa kuthelekiswa ne-anesthesia ngokubanzi, i-anesthesia yendawo ineenzuzo ezizodwa kwezinye iinkalo. Okokuqala, i-anesthesia yendawo ayinampembelelo ekubambeni; okwesibini, i-anesthesia yendawo inokuba nenqanaba elithile le-analgesia yasemva kokusebenza; Ukongeza, i-anesthesia yendawo kulula ukuyisebenza, ikhuselekile, kwaye ineengxaki ezimbalwa, kwaye ayinampembelelo mncinci ekusebenzeni komzimba wesigulana, esinokuthintela Inokunqumamisa iimpembelelo ezahlukeneyo zemithambo-luvo, ukunciphisa impendulo yoxinzelelo ebangelwa kukonzakala kotyando kunye ukuchacha ngokukhawuleza.
Nangona kunjalo, i-anesthesia yendawo kunye ne-anesthesia ngokubanzi ihlala ihambelana kwiklinikhi, kwaye ezi ndlela zimbini zokubulala iintlungu azinakubekwa zodwa ngokupheleleyo. Endaweni yoko, kufuneka zithathelwe ingqalelo njengenxalenye yesicwangciso se-anesthesia esenzelwe wena kwizigulana ezithile. Kubantwana, abagula ngengqondo okanye abagulayo abangaziyo, i-anesthesia yendawo akufuneki isetyenziswe yodwa ukugqibezela utyando, kunye ne-anesthesia esisiseko okanye i-anesthesia ngokubanzi kufuneka yongezwe; I-anesthesia yendawo inokusetyenziswa njengesixhobo esincedisayo se-anesthesia ngokubanzi yokuphucula ukusebenza kwe-anesthesia kunye nokunciphisa inani le-anesthesia ngokubanzi.